Nokia ọhụrụ 1.4 na gam akporo Go: atụmatụ, ọnụahịa na nnweta | Gam akporosis
HMD Global amalitela ọhụụ ọhụụ ọhụụ, nke ewepụtara dị ka Nokia 1.4 Ọ na-abịa na ọnụahịa dị ọnụ ala nke na-egosi na ọ bara ezigbo uru maka obere akpa ọ bụla.
Nchịkọta a na-abịa n'aka Snapdragon 215 processor chipset, otu nke nwere ike ịrụ ọrụ na elekere elekere 1.3 GHz ma quad-isi. Karịsịa nke a bụ na ọ bụ ekwentị arụmọrụ dị ala maka ndị ọrụ na-achọghị ọrụ.
1 Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Nokia 1.4
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Nokia 1.4
Maka ndị na-ebido ya, Nokia 1.4 ọhụụ nwere ihuenyo diagonal 5.5-inch na mkpebi HD + na usoro ngosi ngosi 20: 9. Igwe panel bụ IPS LCD, iji belata ọnụ ahịa na ngalaba a.
N'ịga n'ihu ikwu banyere ncheta nke ngwaọrụ a, anyị ghọtara na ọ na-abịa na RAM nke egosiri na nsụgharị atọ, nke bụ 1, 2 na 3 GB, nke, n'otu n'otu, jikọtara ya na ebe nchekwa dị n'ime 16, 32 na 64 GB. Iji gbasaa ROM, enwere nkwado maka kaadị microSD nke ruru ikike 128GB.
Banyere obodo kwụụrụ nke Nokia 1.4, enwere a 5.000 mAh batrị nke a na-ebubo site na ọdụ ụgbọ mmiri microUSB. Nke a na - enyere aka ịdị arọ nke ekwentị dị ala ka ọ bụrụ ihe dị ka gram 178, ebe akụkụ ya bụ 166.42 x 76.72 x 8.7 mm.
Igwefoto igwefoto nke ekwentị dị okpukpu abụọ ma ọ bụ ihe nhọta 8 MP na-ebugharị, nke a na-esonyere ya na igwefoto macro 2 MP na ọkụ ọkụ ọkụ. Onye na-agba onwe ya ụra, ka ọ dị ugbu a, bụ 5 MP.
Sistemụ arụmọrụ bụ Gam akporo 10 Go Edition na ebube ya niile. Enwekwara onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ.
Ejirila Nokia 1.4 n'ọtụtụ ahịa, ọ bụ ezie na ọ dịbeghị na Spain. Ọnụ ya na-amalite site na euro 99 maka ọdịiche nke 1 GB nke Ram na 16 GB nke ebe nchekwa dị n'ime.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ejirila Nokia 1.4 jiri gam akporo Go: atụmatụ, ọnụahịa na nnweta